Ma loo baahan yahay aqoon iyo waayo aragnimo maamul? | Somali Wiki
Home / Aqoon / Ma loo baahan yahay aqoon iyo waayo aragnimo maamul?
Ma loo baahan yahay aqoon iyo waayo aragnimo maamul?
Posted by: somaliwi in Aqoon March 7, 2017	Comments Off on Ma loo baahan yahay aqoon iyo waayo aragnimo maamul? 601 Views
Marka jaamacadda lagu baranayo cilmiga maamul waxaa qeexitaanka ka mid ah in maamulku yahay SAYNIS iyo ADAB (ARTS) labadaba. Marka la leeyahay waa arts waxaa loola jeedaa inaysan jirin hal jid oo loo mari karo xallinta arrin oo ay xaaladdu tahay hadba siday kugu qabato. Laakiin marka la leeyahay waa saynis waxaa loola jeedaa in maamulku uu gaaray meelaha qaarkood heer uu noqday sidii 2+2=4. Taas waxaa loola jeedaa in maamulku u baahan yahay in loo barto sidii sayniska oo kale, iyadoo caqliga iyo kartida aadanaha la adeegsanayo.
Laakiin Soomaalidu uma arkaan sidaas oo waxay badankood aaminsan yihiin in qof kasta maamule noqon karo, oo aysan aqoon iyo karti kale muhiim u ahayn sida looga rabo macallinka dhigaya xisaabta, iwm. Sidaasi darteed, halkii qofka aasaasay shirkad, jaamacad, iskuul, hay’ad, iwm uu u raadin lahaa qof leh karti iyo aqoon maamul isaga ayaa hawlihiisa wadanaya, waxaana suurtogal ah inuusan qofkaas maamulka ku fiicneyn.
Maamulka nolosha oo dhan ayaa ku xiran, wuxuuna ka soo billowda qofka iyo qoyska, waxayna Soomaalidii hore ku maahmaahi jirtay ‘aqool (maamul) xumo, abaar ka daran’. Waxaa loola jeedaa in waxa aad haysato oo aadan si fiican u maamreynin ay ka daran tahay adigoo aan haysan. Si kale haddii loo dhigana waxa aad haysato oo aad si fiican u aqoolato (maamulato) ayaad abaar kaga badbaadi kartaa”.
Maamulka xafiis dowladeed, shirkad, hay’ad, jaamacad, iskuul ee la ciriirsanayo waa waxa Soomaali meeshan dhigay.
Taladu waxay tahay aanu barano maamulka, uguna dhaqano mabaadii’diisa si wanaagsan. Haddii aadan lahayn aoqontaas iyo kartida loo baahan yahay, ka raadso qof kale, haddii taas la yeelo waxaa hubaal ah in horumar shakhsiyeed, shirkad, hay’ad, iyo dalba lagu gaarayo.
Maamulku indha-adeyg iyo af-miinshiirnimo ma aha!!
Previous: Farqiga ereyo la isku khaldo: (Magacaabis/Doorasho, Dakhli/kharash, dowlad/xukuumad, mushaar/gunno)
Next: TAARIIKHDII ABATIYOW